आज महाशिवरात्रि पर्व ! पशुपतिनाथ दर्शनका लागि यी पाँच स्थानबाट गरिएको छ लाइन लाग्ने व्यवस्था – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
आज महाशिवरात्रि पर्व ! पशुपतिनाथ दर्शनका लागि यी पाँच स्थानबाट गरिएको छ लाइन लाग्ने व्यवस्था
काठमाडौं । आज महाशिवरात्रि पर्व । देशभरका शिवमन्दिरमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिदैछ । महाशिवरात्रिमा लाखौंको संख्यामा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने भक्तजनको भीड लाग्ने गर्दछ । यस वर्ष महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि पाँच स्थानबाट लाइन लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसैगरी तिलगङ्गा राममन्दिरतर्फसमेत आवश्यकता अनुसार एक लामको व्यवस्था गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले जानकारी दिए । नित्य दर्शनार्थीका लागि बिहान ७ बजे अगावै भुवनेश्वरीस्थित फलामको सानो ढोकाबाट प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको छ । जुन दर्शनमार्गबाट मन्दिर प्राङ्गण प्रवेश गरिन्छ सोहीमार्ग हुँदै मन्दिर प्राङगणबाट बाहिरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंक र खल्तीबीच सम्झौता, यस्ता छन् सम्झौताका बुँदाहरु